Maamulka Militeriga Masar oo shaaciyay waqtiga la qabanayo Doorashada Wadankaasi – SBC
Maamulka Militeriga Masar oo shaaciyay waqtiga la qabanayo Doorashada Wadankaasi
Posted by Webmaster on Noofember 23, 2011 Comments
Madaxda Maamulka Milliteriga ee Wadanka Masar ayaa Mohamed Hussein Tantawi ayaa ka hadlay waqtiga Rasmiga ah ee ay wadankaa Masar ka dhacayso doorashada Baarlamaaniga isaga oo sheegay in bisha July 2012 ay dhici doonto.
Warka Dowlada KMG ee Masar ka soo baxay waxaa uu imanayaa xilli kumanaan shacabka Masaarida ah ay banaanbaxyo xoogan ka wadaan Magaalooyinka Wadanka Masar kuwaasi oo si aad ah uga soo horjeeda Maamulka Milliteriga ee wadnkaasi Maamulaya.
Ka dib markii uu soo baxay warka Dowlada Masar waxaa markale sii kordhay diidmada banaabaxayaasha oo sheegay inaysan marnba yeeli doonin go’aanka ay dowlada wadankaasi soo gartay ee la xiriirta sida laga yeelayo ayaaha wadankaasi .
Banaabaxyada laagu diidan yahay Maamulka Meleriga ee wadanka Masar waxaa inta la ogyahay ku dhintay dad ka badan 30 qof oo dibad baxayaal ah tiro ka badan 2000 oo qofna waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan.
Ciidamada Amaanka ee wadanka Masar ayaa dadka dibadbaxaya ka wada Fagaaraha Taxriir waxay ku kala eryayaan Rasaasta Rabadhka ah iyo Sidoo kale gaaska dadka Ilmada ka keena kuwaasi oo dadka qaar ay ku xanuunsadeen.
Magaalooyinka kale ee wadanka Masar sida Alexandria, Suez, Port Said iyo Aswan ayaa waxaa si aad ah isku soo baxay malaayiin dad shacab ah kuwaasi oo iyaguna diidan Maamulka Masarida waxayna ku dhaliilayaan in uu dalka ka saari waayay xaaladaha shaqo la’aanta ah.